बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा प्रसाईं, उपाध्यक्षमा खतिवडा - Baikalpikkhabar
झापा/ झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका मनोज प्रसाई विजयी हुनु भएको छ । प्रसाईले ३१०१ मतान्तरले नेकपा एमालेका मिरा भुर्तेललाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको हो । प्रसाईले ११४०३ मत प्राप्त गर्दा भुर्तेलले ८३०२ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका भवानी प्रसाद खतिवडा निर्वाचित हुनु भएको छ । खतिवडाले माओवादी केन्द्रका खड्गप्रसाद तिम्सिनालाई २८५८ मतान्तरले पराजित गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा विजयी हुनु भएको हो । खतिवडाले ८०७४ मत ल्याउँदा तिम्सिनाले ५२१६ मत ल्याउनु भएको थियो ।
७ वटा वडाहरु रहेको बुद्धशान्तिमा वडा नंं २, ४, ५ र ६ नेपाली काँग्रेसले जितेको छ भने वडा नं. १, ३ र ७ एमालेले जितेको छ । यस अघि पनि बुद्धशान्तिमा अध्यक्ष काँग्रेस र उपाध्यक्ष एमालेले नै जितेको थियो ।
शुक्रबार, ०६ जेठ, २०७९, बिहानको ०७:४९ बजे
काठमाडौं, असार १४ / वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीको सचिवालयमा ८ जना रहने घोषणा गरिएको छ। मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गौतमले नयाँ पार्टीसहित सचिवालय गठनबारेको जानकारी दिएका हुन् । सचिवालयमा गौतमसहित डीबी कार्की, ओम शर्मा
१४ असार, काठमाडौं/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बामदेव गौतमले नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने भएका छन् । नयाँ पार्टी घोषणा गर्न गौतमले आज पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका छन् । मंगलबार दिउँसो ३ बजे रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर
जसपाले पनि सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने, नयाँ मन्त्री को को ?
काठमाडौं, असार १४/ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ । सोमबार राति बसेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी समिति बैठकले सरकारमा रहेका चारवटै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । उपेन्द्र पक्षीय
दमक / नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट उनिहहरु मन्त्री भएका हुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएकी हुन् । एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा